Etu aga-esi gbakwụnye ọnụego nnabata Email | Martech Zone
Ọ bụ ihe ịtụnanya nye ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbe ha chọpụtara na 60% nke ndị debanyere aha na ndepụta email dị larịị. Maka ụlọ ọrụ nwere ndị debanyere aha email 20,000, nke ahụ bụ ozi ịntanetị 12,000 kwụsịrị.
Imirikiti ndị na-ere ahịa email na-atụ ụjọ na ịhapụ otu onye debanyere aha ha. Mgbalị ọ chọrọ iji mee ka ndị debanyere aha a banye na-akwụ ụgwọ ma ụlọ ọrụ nwere olile anya na otu ụbọchị ga-eweghachi ego ahụ. Otú ọ dị, ọ bụ ihe nzuzu. Ọbụghị naanị na ha agaghị akwụghachi ụgwọ ndị ahụ, enweghị njikọ na ọrụ nwere ike itinye ya ntinye igbe nke ndepụta ha niile n'ihe egwu.
Matt Zajechowski nke ReachMail ejikọtara edemede a pụtara ìhè na ozi gbasara ozi metụtara, Etu aga-esi degharịa aha ndenye aha gị, kedu ka esi abanye ndị debanyere aha ọzọ. Lee usoro o keere:
Belata ugboro ole nke email gị na-eziga.
Zube ọdịnaya gị ka nta, mkpa, nkewa ndepụta.
Kọwaa ndị debanyere aha na-adịghị arụ ọrụ iji njirisi nke gị ma kwụsị iziga ha.
Chepụta mkpọsa ị ga-eme ọzọ na-arịọ ndị debanyere aha ịbanye ma ọ bụ laghachi.
Ndị Nleta Ndị Ahịa Facebook na-enye gị ohere bulite ma lekwasị ndị debanyere aha gị anya, ụzọ dị mma iji ruo ndị debanyere aha ụra.
Jide n'aka na ịpịrị ihe odide ozi nke Matt ma gụọ ndụmọdụ ndị ọzọ banyere isiokwu a!
Tags: ndepụta ndenye aha dormantemail debanyere ahantinye aka emailemail debanyere aha re-itinye akaomenala ndị na-ege ntị na facebookndenye aha
Zụ ahịa na Ndị Ọrụ Smartwatch: Nnyocha Need Kwesịrị Knowmara